Ihe mgbochi Flash maka ihe nchọgharị niile
Steve Jobs bụ nri. Onye mbụ gwara m ka m nweta ihe mgbochi Flash bụ Blake Matheny. Blake bụ otu n’ime injinia kachasị mma m nwetụrụla obi ụtọ ịrụ ọrụ - mụ na ya rụkọkwara ọrụ Ngwakọta na na ChaCha. Ga-eche na m ga-ege otu nwoke ntị nke gbanwere akụrụngwa na ikpo okwu dịkarịa ala ụlọ ọrụ teknụzụ abụọ dị iche iche.
Egeghị m ya ntị. Anọ m na-eme mkpagharị tinyere… na-eji Chrome na Firefox ma na-elele ibe ka ifriizi, ma ọ bụ mechie laptọọpụ m nwa oge. N'oge ụfọdụ, m na-egbu ihe nchọgharị ahụ.
Izu gara aga a, enwere m nzukọ mara mma na Michael Cloran Obodo Mmepụta. Michael chịkọtara ndị kasị mma nke kacha mma na Mmepụta talent na ya ịmalite ịmalite… na maa ihe? Ha niile na-eji ihe mgbochi flash. Ọ gwara m n'oge na-adịbeghị anya ọ malitere iji otu ọ bụ ihe ịtụnanya na etu esi sụgharị saịtị na obere nsogbu ole na ole o nwere.
Ya mere, na Tuesday, ekpebiri m ịnwale ya. Ejiri m ihe mgbochi ihe mgbochi maka Chrome. Anọ m n’eluigwe n’izu niile. Ihe niile na-ebu ngwa ngwa, ọnweghị ihe ọ bụla, ma anaghị m atụfu Flash ọhụụ. Site n’oge ruo n’oge, achọrọ m Flash ka onye nkwụchi ahụ na-enye m ohere ịpinye ihe Flash ọkụ ma ọ gbagoo. Na mgbakwunye, enwere m ike ịpị nri (eg Youtube) ma họrọ ịhapụ Flash ka ọ kwụpụta site na saịtị ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-agba nchọgharị ọzọ, ị nwere nhọrọ:
Firefox - Mkpọchi mgbakwunye.
safari - PịaToFlash.
opera - Mkpọchi.
IE 7 - Mgbasa Ad nwere Flash igbochi.
IE 8 - nwere mgbanwe iji gbanye Flash saịtị igbochi.
Ọ ga-eju gị anya na ọtụtụ saịtị jiri Flash. Enwere m mmetụta na ụfọdụ ndị nwe saịtị ahụ amataghị ya. Site n'oge ruo n'oge, Ana m ebugharị blog a ma amaghị na mgbasa ozi 3 na-abịa na Flash. Onweghi ihe na -egbu maramara banyere ha… ma ha nọ ebe ahụ!
Nke a bụ ihe atụ doro anya karị, Ihe nkedo Castor saịtị na-enweghị na Flash. Usingkpachapu ọkụ na-egosi ya na ịpị ya na-agbazi usoro Flash ahụ.
Dika HTML 5 buru eziokwu, Adobe gha acho inweta ya mana o gha etinye ya ihe ngbanwe Flash site na ala. Enweghị m mmasị ikwenye na Steve Jobs, mana na nke a ọ nwụrụ. Banyere ụlọ ọrụ ndị na-echere ọdịnihu ha na Flash, ịnwere ike ị nweta atụmatụ ndabere. Ọ bụrụ na ị hụbeghị HTML 5, Apple nwere a nnukwu ngosipụtaN'agbanyeghị na ha chọrọ ka ị jiri Safari lelee ya.
Tags: igbochi adadobe flashna -eme mkpọtụmmmmmmmmmmmmmChachapịatoflashkomendiumflashngọngọflash saịtị na-egbochiarụ ọrụ
WordPress 3.0 - Enweghị m ike ichere!